Waa kedise kororso aqoontaadda !!!!!!!!!!! W/Q:Khadar Jamac Dirir | Somaliland Post
Home Maqaallo Waa kedise kororso aqoontaadda !!!!!!!!!!! W/Q:Khadar Jamac Dirir
Waa kedise kororso aqoontaadda !!!!!!!!!!! W/Q:Khadar Jamac Dirir
Madaxweyne Siilaanyo oo baryo badan lagu arag saxda dadweynuhu ku kulmaan ayaa shalay si kedis ah ku tagay shaarciyadda caasimadda isagoo u kuurgalaya nabada ka tisqaaday gayigan curdinka ah, waxaanu markii dambe salaada jimcaham kula tukaday dadweyiniih cibaadada isugu yimi isaga oo ay wejigiisa ka muuqatay farxad iyo dhoola-cadday oo cidii ka hortimaadaba ku qaabiliyey lab xaadhan iyo furfuran.
Socdaalkan uu madaxweynuhu sameeyey ayaa ah mid ay ku dhaqanto xukuumadan uu imika gadh-waddeenka ka yahay ee KULMIYE isagoo xukuumadihii ka horeeyey aanay lahay wax u kuurgelida oo ka dhan ah indho-indhanta shacabka iyo u kuurgalida xaaladda ay ku suganyihiin dadweynihii soo doortay.